टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर
Thu, Apr 19, 2018 | 23:27:31 NST
16:41 PM ( 1 year ago )
Total Views: 41.2 K
काठमाडौं, फागुन २४ – अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले विभिन्न योजना ल्याएको छ । टेलिकमले दिवसका अवसरमा आफ्ना उपभोक्ताका लागि विभिन्न सेवामा सहुलियत दिन लागेको हो ।
योजना अन्तर्गत फेसबुक प्याकेज, डे एण्ड नाइट डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज रहेका छन् । बुधबारदेखि तीन महिना कायम हुने योजना अन्तर्गत फेसबुक प्याकेजमा २२ रुपैयाँ ६० पैसामा पाँच दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १ सय एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी डे एण्ड नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत १ सय रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म ५ सय एमबी र बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म १ सय एमबी डाटा सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने टेलिकमले जनाएको छ ।
नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत ४५ रुपैयाँमा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ५ सय एमबी सात दिनसम्म र ९० रुपैयाँमा राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म १२ सय एमबी डाटा १५ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख ६ – सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली बजारमा Samsung Galaxy S9+ 128 GB प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
बाँदरबाट हामीले पैसाको बारेमा के सिक्न सक्छौँ ?
वैशाख ६ – पैसाको बारेमा के हामी बाँदरसँग केही सिक्न सक्छौँ ? कसरी खर्च गर्ने ? कस्तो जोखिम लिने ? कहाँ लगानी गर्दा फाइदा हुन सक्छ ? के हामी पैसाको बारेमा यी प्रश्न हरुको उत्तर बाँदरसँग सिक्न सक्छौँ ।
​ट्विटरमा यस्तो समस्या देखियो !
वैशाख ४ – सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ ।
रसुवागढी नाकामा सीसीटीभी जडान
रसुवा, वैशाख ३ – नाकामा हुन अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि १२ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।